Sango rinoziva zita rako, mashiripiti echokwadi aAlaitz Leceaga | Zvazvino Zvinyorwa
Sango rinoziva zita rako
Sango rinoziva zita rako.
Sango rinoziva zita rako (2018) inoverengeka nemunyori weBilbao Alaitz Leceaga. Mune iro basa, munyori anotarisisa kutarisa kwemuverengi panhau yemapatya hanzvadzi mbiri - dzinopikisana uye dzakafuma kubva pakuberekwa, vadyi venhaka yeMarquis yeZuloaga - vane masimba ekuzvarwa uye akasarudzika masimba akawanikwa kubva kumutsara wamai.
Uye zvakare, uye sekuwedzera kwekunyongana uye chakavanzika, kutuka kusingazivikanwe kunoshungurudza vasikana uye kwakaratidza kuti vamwe vavo vanozofa vasina chokwadi kana vasvitsa makore gumi nemashanu. Kutenda kushambadziro yakanakisa, uye mimwe mitsara yakanaka kwazvo yekuzivisa yakawanikwa naLeceaga, iyo novel yakakwanisa kuzvimisa pachayo nekukurumidza pane akanyanya-kutengesa zvinyorwa mumwedzi wayo wekutanga.
1 Nezve munyori, Alaitz Leceaga
2 Nezve inoverengeka: Sango rinoziva zita rako
2.1 Iko kwemashiripiti kwechokwadi kwaLeceaga
2.2 Nguva, nzvimbo nemamiriro avo
2.3 Villa Soledad uye nemhuri inogara mairi
2.4 Zano iri rinoenderera mushure mekufa kwekuziviswa
3 Vamwe vanonyanya kutaurwa munyaya
3.3 Iyo Marquis yeZuloaga:
3.4 Ambuya Soledad
4 Zviratidzo uye kunyanyisa
5 Nyaya yakachengetedzwa-zvakanaka, kunyangwe ihurefu
5.1 Rondedzero inotsanangura inononoka
6 Zvimwe zvakasununguka zvinopera
7 Mashoko ekupedzisira
Nezve munyori, Alaitz Leceaga
Sekunyora kwakaita Irene Dalmases Zvizhinji, muchikamu che "Feminist Tribune":
“Shangu tsvuku yakasurukirwa yakakandwa padyo nedombo reCantabrian yakatungamira Alaitz Leceaga kubva kuBilbao kuti agare pasi pakombuta kuti agadzire nyaya yemapatya maviri, Estrella naAlma, protagonists venyaya iyi Sango rinoziva zita rako"...
Uye nekudaro, nekutsunga - asi kwete nemashiripiti, sezvinhu zvakawanda murungano rwake uye mune zviuru zvake zvemitsara yekunyora - munyori akakwanisa kuumba chirongwa chakamuita kuti anyatsooneka munyika yeEurope neyepasi rese yetsamba. Aingova nemakore makumi matatu nemasere (akaberekwa muna 38). Izvo zvinouya kubva kuchizvarwa ichocho chakanakidzwa nenyaya dzinotaurwa husiku mumahoro, musango, mumakamuri uye munzvimbo dzese dzakanaka dzaunogona kunakidzwa nenyaya. Basa rake rinoridzira mhere.
Sezvaakataura mune imwe bvunzurudzo ku Zvizhinji, Leceaga "aigara achiziva kuti aizove munyori." Izvi zvinoratidzwa nerudo rwake rwekutanga rwekuverenga, kuve nekugadzwa kwakakosha kwemabhuku ane zvemashiripiti, zvemashiripiti theme uye neyevakadzi basa. Nekudaro, iwo musoro wenyaya wayo zvakare une chinangwa chekusimudzira iro basa revakadzi munharaunda munharaunda munhoroondo yevanhu.
Munyori akazivisa kuyemura Isabel Allende nebasa rake, nemabatiro akaita munyori akabudirira kuisa vakadzi muchirongwa chake. Munguva pfupi yapfuura, Leceaga akaburitsa yake nyowani nyowani, Vanasikana venyika (2019). Nhau yebhuku iri zvakare yakavezwa neiyo bata yemashiripiti uye nekupa simba kwevakadzi, asi panguva ino muzana ramakore rechiXNUMX, muLa Rioja uye kuva neminda yemizambiringa sevapupuri vezviitiko.
Nezve inoverengeka: Sango rinoziva zita rako
Iko kwemashiripiti kwechokwadi kwaLeceaga
Chinyorwa chakagadzirwa mukati memashiripiti, asi nekubata chaiko kwemunyori. Ngano dzeSpanish uye ngano dzekutukwa kweiyo midzi yechigypsy zvinomira pachena, kunyangwe zvichisanganiswa neLatin American nuance iyo inowedzera Mbuya Soledad.
Nguva, nzvimbo nemamiriro avo
Nguva yezviitiko zvinomuka yakarongedzwa muhafu yekutanga yezana ramakumi maviri, pakati chaipo pezana ramakumi matatu nerechishanu. Nezve nzvimbo, kunyangwe hazvo zano rinotangira muBangondo yekufungidzira, Spain, yakatarisana neGungwa reCantabrian, Leceaga inofamba ichiverenga kuburikidza neEngland neUnited States; muSurrey neCalifornia, zvichiteerana.
Iyo ngano rondedzero inojekesa nenzira ine hungwaru zvikuru nezviitiko zvakaita sehondo zvakaratidzira iyo nguva yevanhu. Ipapo, iwe unogona kuverenga kuti zviitiko zveSpanish Civil War, Hondo Yenyika II uye Kumukira kwevashandi vemumigodhi muAsturias zvine hukama mune akakosha mapoinzi. Zvese izvi, tichitaura nezvemashiripiti nezviito zveboka rakasviba reNazi Ahnenerbe uye zvisizvo zvavo zvisina kujairika.
Panguva iyoyo, yakamisikidzwa neidzo zvitendero nezve zvakasikwa uye pasi peiyo nhoroondo mamiriro, nhoroondo ye Sango rinoziva zita rako. Zvino, tichitaura nezve rangano yepakati, tinowana nyaya inokwezva nezvakavanzika zvayo kubva pakutanga. Uye ndezvekuti kutukwa kunounzwa netsananguro dziri kure uye zvinoda kuti zviongororwe zvakakwana, zvisungwe, zvisingaite.
Villa Soledad uye nemhuri inogara mairi
Izvozvi, pachezvayo, kuiswa kweVilla Soledad —Imba inotangira zvese zvese uye inoitwazve munzvimbo iyo Gungwa reCantabrian rinosangana nesango gobvu uye risinganzwisisike. inoputira. Mune zvivakwa zvayo, Leceaga iri kutiratidza hupenyu hwemhuri yeZuloaga uye maprofayiri enhengo yega yega.
Chimwe chinhu ndechechokwadi muverengi paakatarisana nehunhu hwese, uye ndizvozvo: kana iwe unovenga ivo nekuda kwekuipa zvakanyanya, kana iwe unovada nekuda kwekugona kwazvo. Iwo epakati mazwi haakoshese zvakanyanya, kwete senge kungogara kuchinjika kwemativi nemaonero. Ichi chekupedzisira chakatarwa zvakanyanya panguva yekurondedzera.
Mharidzo yeva protagonists (Alma naEstrella) uye mavara avo, kunyange hazvo zvisingaite -Yin-Yang-, inoitwa zvakanaka. Uye zvakare, izvi zvinowedzeredzwa zvakakwana nemasimba ane vese. Uye kana kune izvi zvese tichiwedzera kutuka kunoreva kuti mumwe wavo anofanira kufa kana achinge asvitsa makore gumi nemashanu, mhedzisiro iyi fomura inosunga uyo anoverenga kusvika vaziva kuti zvichaitika sei uye ndiani anofanira kuva neanouraya destiny.
Zano iri rinoenderera mushure mekufa kwekuziviswa
Zvichida chikamu chechinhu chakanakisa ndechekuti mushure mechiitiko icho chisina kunaka, rangano iri rinoramba richichinja, pamwe chete nevanyori. Aya ndiwo mabudiro matsva uye anonakidza ari kusimudzwa. Sezvambotaurwa, zviitiko zvakaitika zvakaitika mumakumi matatu emakore aya anokonzeresa kuEurope nepasi rose zvinotsanangurwa, nepo muponesi wekutukwa achirwa nemifananidzo yemadzitateguru yenguva yekuwonekera nekuratidzira simba revakadzi.
Quote naAlaitz Leceaga.
Vamwe vanonyanya kutaurwa munyaya
Uyu ndiye "akanaka" mapatya ane rakapfava hunhu. Chipo chake ndechekugona kutaura nevakafa. Mukuwedzera, inguva yake yekuchengetedza chakavanzika chekutukwa kwekuti ndiani achafa pazera remakore gumi nemashanu.
Iye ndiye mapatya echimiro chisingakundike, seSpanish Doña Bárbara. Iine simba rakasimba rekuzvifunga, rakasanganiswa nekudikanwa kunoshamisa kwekuedza kuwana mukurumbira. Izvo chete zvinokanganisa pabasa rake semunhukadzi akapiwa simba nderekuti anozadzisa zvakawanda zvezvinangwa zvake nekuda kwerunako rwake.
Iyo Marquis yeZuloaga:
Ndiye baba vemapatya. Iye anozivikanwa nekuve akajairika bossy macho. Muminda yake, izwi rake ndiwo mutemo, uye wese anomupikisa anovaona zvakashata, kunyangwe vanasikana vake nemukadzi wake. Iye anozviisa pasi pekupedzisira uye haana kodzero kune chero chinhu chinopesana nezvido zvake.
Zviri iye kuti Villa Soledad inovakwa. Murume wake, Don Martín, akaita kuti imba yacho ivakwe sechiyeuchidzo cherudo rwake. Iye anobva kuMexico kwakatangira uye zvipo zvemashiripiti zvemapatya zvinobva mudzinza rake. Ndicho icho chinogona kuverengerwa se "shaman". Pakati pezvipo zvake zvepamusorosoro, ita simba rekuprofita zvakaipa zvichaitika, kana panguva ipi maruva achasvika pakubwinya kwavo. Inotofanotaura dutu uye ine simba pamusoro pezvisikwa.
Iye ndiye ane basa rakakosha rekuchengetedza mapatya. Hongu, iyo lullaby. Iye anonyatso zadzisa basa ramai kuna Estrella naAlma. Iye hunhu hunodiwa nyore uye hunobata nekupindira kwake.
Zviratidzo uye kunyanyisa
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti pane kushungurudzwa zvine chekuita ne stereotype yemachismo mune echirume mavara, aine chinongova chinhu chimwe chete icho chiri "chakanaka". Izvo zvakanyanyisa zvinonzwisiswa zvakajeka: imwe ingirozi yakanaka kana yakaipa dhimoni.
Nepo iyo yekupedzisira iri pachena mune akawanda mavara ari mubhuku, zvinogona kuonekwa zvakanyanya mumabasa aAruma uye neeMarquis yeZuloaga. Uye kwete, hazvisi zvekuti vanhu vakadaro havapo, zvinongova kuti zvishoma zvekuchinjika uye kuratidzira kuti uongorore mamwe ma nuances zvinogona kusimbisa iro zano.
Nyaya yakachengetedzwa-zvakanaka, kunyangwe ihurefu
Kune vamwe vese, uye kunyangwe pakureba - anopfuura mazana manomwe emapeji muiyo vhezheni yedhijitari - munyori aiziva nzira yekurarama nehurongwa. Izvo hazvisi nyore kuchengeta muverengi akasungirirwa kune yakadaro nyaya, maererano nehurefu uye zvemukati. Izvi zvinodaro nekuti, uye nezvakakodzera zvinofanirwa kutaurwa, kunyora kwaAlaitz Leceaga kutsva.
Rondedzero inotsanangura inononoka
Zvino, muzvikamu zvina - Moto, Mvura, Mhepo neNyika - uye muzvitsauko makumi maviri nezvina, pane nguva apo rondedzero inononoka. Muchokwadi, inotonetesa uye inodzokorora. Izvi zvinoitika mukumira kunotsanangudza kwegungwa, nzvimbo dzinojairika, sango. Nekudaro, iye anokunda uye anotora danho zvakare.
Zvimwe zvakasununguka zvinopera
Chimwe chinhu chisingaregi kucherechedzwa zviitiko zvisina chikonzero chine musoro chekuve. Ndokunge, zvinoitika "nekuda kwekuti", sekunge zvinhu zvese zvakaungana kuitira kuti zviitiko zvisingatarisirwi zviitike, zvichidzokorora uye nekudzokorora. Uye, nepo mashiripiti echokwadi achibvumidza mamwe mukana wemunyori, kuushandisa kunogona kunge kusiri sarudzo yakanaka.
Zvinonyanya kufadza kuti muverengi azive chikonzero chezviitiko, kunyangwe izvi zvisiri pachena ipapo. Uye ndezvekuti kusiya zvakasununguka magumo, zvakawandisa, kupfuura zvakavanzika, zvinogona kureva kumwe kushayikwa kwekutarisirwa kana kusava nehanya. Ehe, izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti hurefu hwebhuku iri hunokosha uye kwaive kubheja kukuru kune chikamu chemunyori. Uye zvakare, akazadzisa basa rake nekutengesa uye kuzivikanwa. Izvi, pachazvo, zvatove nezvakawanda munyika yanhasi yemakwikwi ezvinyorwa.
Unogona kuva nazvo Sango rinoziva zita rako sebhuku revaverengi vanoda kutanga kuverenga zvakanyanya, pamwe nevadzidzi vane ruzivo. Ehezve, vatengesi vanozoona iwo maburi uye votaura nezvawo, asi zvinodzokera kuchinhanho chepurojekiti yekutanga yakazara ine zviitiko zvakanaka kwazvo. Basa iri kukokwa kwekufema mweya nyowani uye nekuwana mavari fungidziro uye kukurudzira kwemunyori uyu weBasque.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Sango rinoziva zita rako
Jesús Maeso de la Torre: "Iri ibasa uye masi havapo"
Kubvunzana naIsabel Abenia: "Unofanirwa kunge uchikumbira iwe pachako"